Dakhtarkii weynaa ee Soomaaliyeed Maxamed Jaamac Salaad oo geeriyooday - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDakhtarkii weynaa ee Soomaaliyeed Maxamed Jaamac Salaad oo geeriyooday
August 8, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Marxuum takhtar Maxamed Jaamac Salaad. [Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dakhtarkii weynaa ee Soomaaliyeed Maxamed Jaamac Salaad sidoo kale loo yaqaan (MJ) oo aqoonta u lahaa qaliinka xanuunada neerfaha ayaa geeriyooday, sda ay xaqiijiyeen qoyskiisu.
Maanta oo Talaado ah ayuu ku geeriyooday isbitaal kuyaala magaalada Rooma ee dalka Talyaaniga halkaas oo lagu dabiibayay.
Maxamed Jaamac waxa uu ahaa mid kamid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee xirfada leh. Dabayaaqadii sanadkii 1970-kii ayuu dalkiisa kusoo noqday si uu uga bilaabo shaqadiisa kadib markii uu kasoo qalinjabiyay jaamacad kutaala dalka Talyaaniga.
November 4, 2017 Mareykanka oo muwaadiniintiisa u jeediyay in ay ka baxaan magaalada Muqdisho